2011-01-16 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
USB Safely Remove 4-4-2
​မေးးsai tun - ​ကို​ညီ​နေ​မင်း USB Safely Remove 4-4-2 key ​အ​သစ်​လေး​ရှိ​ပါ​သ​လား။ window7​သုံး​ထား​လို့ USB ​သုံး​ရ​တာ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​လို့​ပါ။ ​ရှိ​ရင် ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး! version 4-4-2 ​ပါ။
​ကို​စိုင်း​ထွန်း​ခင်​ဗျာ ​ကျွန်​တော် ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ​ရောက်​နေ​တော့ ​ဖိုင်​တင်​ရ​တာ​က​တော့ ​မ​လွယ်​ဘူး​ဗျာ ​အ​တော်​လေး​ကို ​က​သိ​က​အောင့်​နိုင်​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ့် Link ​က​သာ ​လုပ်​ပါ ​ကျွန်​တော် ​မ​နက်​ဖြန်​ကျ​ရင် Link ​ပြန်​ပြင်​ပေး​ပါ့​မယ် . ​အ​ခု​တော့ portable ​လေး​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​တင်​လို့​အ​ဆင်​မ​ပြေ​မှာ​စိုး​လို့ portable ​ကို ​ရ​အောင် ​ရှာ​ပေး​လိုက်​ရ​တာ​ပါ .
Download ifile.it | rapidshare | zshare | mediafire | hotfile | ziddu | Megaupload